Ciidamada militariga Itoobiya oo kusii siqaya caasimadda Tigray ee Maqalle | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Ciidamada militariga Itoobiya oo kusii siqaya caasimadda Tigray ee Maqalle
Ciidamada militariga Itoobiya oo kusii siqaya caasimadda Tigray ee Maqalle
Ciidamadda federaalka Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay kusii siqayaan caasimadda gobolka Tigray, kadib markii laga gudbay waqti laba toddobaad ah oo ay u qabatay ciidamada TPLF inay isku soo dhiibaan.
“Ficilka ugu dambeeya ee fulinta sharciga waxaa la fulin doonaa maalmaha soo socda”. waxaa sidaas yiri ra’iisul wasaare Abiy Ahmed.
“Kooxda TPLF waxaa dhowaan lagula xisaabtami doonaa burburinta kaabayaasha iyo dambiyada ay ku kacayaan”. ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay guddiga.
Ma jiro illaa iyo hadda wax war oo kasoo baxay TPLF oo la xiriira sheegashada dowladda.
Ciidamad federaalka ayaa sidoo kale sheegtay inay “xoreeyeen” deegaanada Raya, Chercher, Gugufto iyo Mehoni oo ku yaalla qeybaha bari ee gobolka Tigray, iyo deegaanada Shire oo ku yaalla dhinaca galbeed.
Ciidamada federaalka ayaa sidoo sheegtay inay burburiyeen saldhigyo militari xilli ay kusii socdaan Maqalle.
“Ciidamada fallaagada waxay hadda ku jiraan dib u gurasho, waxaana ku siqaya kuwa federaalka si cadaaladda loo mariyo”. ayey tiri dowladda.
Si kastaba, Dowladda waa ay beenisay inay beegsatay shacab.